Ukuhambelana kwe-Aquarius kunye neTaurus: Ubuhlobo, uthando kunye nezesondo - Iimpawu Zezodiac
Ukuhambelana kwe-Aquarius kunye neTaurus: Ubuhlobo, uthando kunye nezesondo
Ubudlelwane be-Aquarius kunye neTaurus ngumceli mngeni! Ukuba aba bantu baneenkani babeka ii-noggins zabo kunye, kufanelekile umzamo! Abanye baya kufumana uqhagamshelo ecaleni kwendibaniselwano engenakwenzeka. Ubuntu bokuzalwa kuka-Aquarian kunye nobuntu baseTaurean banomahluko omangalisayo. Uxinzelelo lubaleka phezulu kwaye lutyhala-luza-lutyhalela ebuhlotsheni, othandweni, nasemandlalweni!
Isibini esichasene rhoqo, ubudlelwane be-Aquarius-Taurus luvavanyo lokwenene lomonde kunye nokuhambelana! Zisa iimagnethi ezimbini kunye, kwaye iziqwenga ziyagxothana. Kukwenzeka okufanayo nakwimeko ye-Aquarius yokungazibopheleli kunye nokufuna ukuzibophelela kweTaurus!
Abahlobo kunye nosapho banokuyibona impixano kwesi sibini. Ubuhlobo bunyamezele nge-Aquarius kunye neTaurus combo. Ngoba? Kuba i-duo inokuthathana ngeedosi ezincinci. Ukungabikho kwengqwalaselo yokuzibophelela kwezothando ayongxaki phakathi kwabahlobo. Kodwa, beka i-Aquarius edidayo kunye nentuthuzelo efuna iTaurus kunye, kwaye kuvela ingxaki!
Kukho ithuba elincinci lokuzonwabisa eliphakathi kunye nomdlalo wothando we-Aquarius kunye neTaurus. Bangoyisa imiqobo yothando okanye hayi. Inzame yokufumana umhlaba ophakathi iphela ngokukhawuleza kwi-chemistry yothando. Ngoba? Ubuntu be-Aquarius kunye neTaurus bajonga umhlaba ngeelensi ezahlukileyo. U-Aquarius unombono obanzi, wehlabathi ojolise kwimigudu yokunceda. I-Taurus inenkani kwaye ayikhathaleli utshintsho. Isimo sengqondo esahlukileyo sikhokelela kwiingxaki nakukulala!
Itheyibhile ye-Aquarius kunye neTaurus
Ukuhambelana kwe-Aquarius kunye neTaurus
Uthando luka-Aquarius kunye neTaurus
Isini sika-Aquarius kunye neTaurus
Indoda ye-Aquarius kunye neTaurus yokuhambelana komfazi
Umfazi we-Aquarius kunye noTaurus ukuhambelana kwendoda
U-Aquarius kunye noTaurus bathanda ukuSonga uMdlalo
Oku kudityaniswa kwabelana ngomdla kubuhle kunye nokumangalisa kobomi. Ubudlelwane be-Aquarius kunye neTaurus buyachuma xa benengqondo efanayo. I-Taurus iyayazi indlela yokubhenela kwicala lobukrelekrele lobuntu be-Aquarius. I-Taurus ayinangxaki ngokuxoxa ngobugcisa ngokwembali. Ukucinga okuya phambili kwi-Aquarius kunokuchukumisa iTaurus ngokuqonda kwabo okumangalisayo.
U-Aquarius ngumntu ojolise kwiinjongo. I-Taurus ijongene nomceli mngeni ngokuhamba. U-Aquarius uyaqhelana notshintsho ngokulula. I-Taurus ayenzi. U-Aquarius unokusebenza njengomfundisi-ntsapho kunye nesikhokelo. I-Taurus inokufunda kwi-Aquarius 'bhetyebhetye kunye nesimo sengqondo esiqhubela phambili. Emva koko, ukungafuduki kweTaurus kungangqina isifundo kwi-Aquarian ekufuneka ifundile ukuhlala phantsi.
Ukuba ezi zimbini zivulelekile ekwamkeleni ubuqabane bomnye, ubudlelwane bunethuba. Ukuhloniphana yinxalenye yefomula yokuhambelana koku kubhangqwa. Imfesane kunye nokuqonda lelinye icandelo lefomula. Uthando yiglue eya kuthi iyitsale yonke kunye ngokusisigxina.
Ukuze uthando lwe-Aquarius kunye neTaurus luhlale luhleli, kuya kubakho amadini. I-Taurus iya kufuna ukuyeka ukugxila kwayo kwisithethe kwaye yamkele ukulinga. U-Aquarius uya kudinga ukuyeka inkululeko yakhe. Ukubeka ikepu kwimida yovavanyo ngumbono ogqwesileyo. I-Taurus idinga umntu onomdla kwaye onothando ukuba ubudlelwane buphumelele. U-Aquarius ufuna amandla angenakulindeleka kwigumbi lokulala kunye nenkululeko ngaphandle kwawo.
Xa sisebenza kunye, olu lwalamano lunokuchuma kwaye lukhuphe ii-vibes ezilungileyo. Iqabane ngalinye kufuneka libe negalelo kumandla alo kulwalamano. Apho elinye iqabane libuthathaka, elinye linamandla linokuthatha indawo kwaye ngokuchaseneyo. Ibhalansi phakathi kwamagunya ngumba ophambili kwimvisiswano koku kumatanela okhethekileyo.
Ngaba obu budlelwane bunokusebenza? Ewe, kodwa kuphela xa iTaurus kunye neAquarius bedlala indima yabo ngokuchanekileyo. I-Taurus idinga ukuthatha uhambo lwe-Aquarian yeengcamango kwaye ibaleke nabo. U-Aquarius kufuneka ahlale ephuphayo kwaye uTaurus abe ngumenzi 'owenziwe kakuhle.' Emva koko ubudlelwane bunokusebenza. Ama-Aquarian kufuneka ancame inkululeko. I-Taurus iya kufuna ukubingelela i-mindset. Esi sibini kufuneka sibeke imida kwaye sivumelane nabo.
I-Taurus inombono wehlabathi kugxilwe kubudlelwane kunye nosapho. Ukuba u-Aquarius ubeka ingqalelo enkulu ngaphandle kobudlelwane, iTaurus iba nomona. Ukuba iTaurus iba yeyakho, u-Aquarius ubopha iibhutsi zakhe zokuhamba ngokukhawuleza!
Ukulindela kwamaqabane kolu lwalamano akuhambelani. Sele uyazi ukuba kwenzeka ntoni xa uxuba ioyile namanzi. U-Aquarius ujolise emanzini kuba asimahla kwaye ayathanda ukuhamba ngokwentando yawo. I-Taurus liqabane elijolise kwioyile njengoko lihamba kancinci. Ngapha koko, ukuba neenkani kwabo kususa ekubeni bhetyebhetye.
Ioyile inyuka iye phezulu emanzini. Ingathi inobunzima bamanzi, ukuwabamba endaweni. Ewe, ubuntu be-Aquarian buya kuqala ukuziva ngathi iTaurus iyababambisa ukuba bayabambelela kakhulu.
I-Taurus ngumphefumlo oqhelekileyo oxabisa isiko. Ngokwesiko kunye nesiqhelo, izinto ziya kuqikelelwa, ezinciphisa ukuhambelana kwe-Aquarius kunye neTaurus. I-Aquarius ayinakuqikelelwa. Ubuntu be-Aquarian bunokungasebenzi kwaye bukude.
Uthando kolu lwalamano kufuneka lusebenze nzulu kangangokuba isibini sikulungele ukutyeshela zonke iingxaki. Ukuhambelana kunokwenzeka, kodwa kuphela xa isibini sihlala kwiinzwane zabo. Bamele balungele ukwenza umsebenzi omninzi weemvakalelo. Uninzi lokulalanisa luya kunceda esi sibini sisebenze kwimicimbi yokuzibophelela.
Olu nxibelelwano luphawulekayo lunokukhawuleza ngokukhawuleza. Oku kuyinyani xa iqabane ngalinye lifumana incasa enzulu yomsindo womnye! Kukho umgca omncinci ochaza imida yothando kunye nobushushu. Nje ukuba unxunguphalo lungene kubudlelwane, loo maxesha anomdla anokuba yimilo evuselelekayo. Ke uninzi lweziphumo zobuso ezinomsindo. Ngelixa ingqumbo yomzuzu inokubonakala intle ngelo xesha, ishiya omabini amaqela engazalisekanga.
Xa usabelana ngesondo kunye nobuntu be-Aquarius, izinto kufuneka zihlale zidlamkile. I-Aquarius yenye yokudinwa kwesiqhelo. Akukho nto ibulala imililo yenkanuko ngokukhawuleza kunesithukuthezi. Uvavanyo lukwimenyu kubudlelwane be-Aquarius kunye neTaurus. Ukufezekisa loo nto, ukuba yeyokwenyama kwaye inomdla, iTaurean ikwibhodi. Kodwa, kukho umda onzima wokuba umde kangakanani umandlalo weTaurus. Imida ilungile, kodwa ukuxhonywa ngokwesondo kuya kuguqula ubuntu be-Aquarius.
Izithintelo kukhetho lwesondo luthambo lwembambano yeAquarius. Utshintsho olusuka kwinkanuko luye eluthulini lufana nomzuzu umntwana omncinci, owoyikayo enkqonkqoza emnyango kwigumbi lokulala! Uyawazi umzuzu xa abazali besiva, 'Mama, ndiyoyika? Ndingalala nawe noTata? ' Kukho umntwana omi yonke into enobukhwele kunye nekerubhi enethemba lokutsiba ebhedini noMama noTata!
Nokuba awunguye umzali, unokukuva phantse UTHUD yesisindo esinzima esibetha kwigumbi lokulala. Yiyo loo nto, bahlobo bam, ubunzima obukhulu bokuxhalaba ngokwesondo! Yinto enye no-Aquarius akuva ukuba iqabane laseTaurus lithi, 'Hayi, hayi, kanjani, kungenzeki!'
Ubuntu be-Aquarius bufuna isikhundla esitsha okanye iindawo ezintsha zokudibana ngokwesondo. I-kink factor ibaleka kakhulu xa udibana ne-Aquarian. Usenokude ubuze ukuba ngaba kukho umda wokuba i-Aquarian iyakuhamba kude kangakanani. Ngaba ikhona into abayithatha ingamkelekanga kwigumbi lokulala? I-Taboo ligama elinguhlobo lwe-Aquarian alwamkeli. I-Taurus iya kufuna ukuzoba umgca esantini. Iya kwenza ukuba iqabane labo lazi ukuba bonwabile xa bekwigumbi lokulala.
Kutheni i-capricorn itsaleleka kwi-geminis
Unxibelelwano lwe-Aquarius kunye neTaurus
Ubume obunoluvo yinto enciphisa umlinganiso wokuhambelana kwe-Aquarius kunye neTaurus. Xa incoko igudile, kwaye bobabini bayavumelana ngezinto, aba babini banokuthetha iiyure. I-Taurus ithanda indlela eyahlukileyo ye-Aquarius yokujonga umhlaba. I-Aquarian iyakonwabela ukuzoba ngobugcisa kunye nokuhle okumiswa nguTaurean kuyo yonke into. Kubukrelekrele obulinganayo, oku kubhangqwa kothando kunokuza nezimvo ezithile zobuchule.
Xa ukungqubana kwezimvo, izinto zinokuba nzima kwisebe lonxibelelwano. Izimvo zingakhokelela kwiingxoxo ezishushu. Emva koko ikhokelela ekungahambelani kwalo naluphi na unxibelelwano lothando. I-Aquarian izakuvala kwaye ifumane isizathu sokuphuma ithutyana.
I-Taurus iya kubambelela kuluvo lobomi obuthandekayo kwaye ayivumi ukuyeka, nokuba ujongene nenkcaso yokwenyani. Inenkani kwimpazamo, isimo sengqondo sikaTaurus sityhala i-Aquarius kude, kwaye ngokukhawuleza. Ngobushushu bempikiswano okanye ingxoxo, i-Aquarius iqhuba ngelixa iTaurus ihlawulisa phambili. Ukuleqwa kungangqina ngonaphakade ukuba ukungavisisani kunamandla ngokwaneleyo!
Ukungqubana kwe-Aquarius kunye neTaurus
Ukungqubana? Uyahlekisa, akunjalo? Owu… ungaqala ngaphi? Impixano phakathi kwaba bantu babini ikhwaza kwiinduli eziphakamileyo! Ubuso bukaMongameli waseMount Rushmore bujamele imihlathi imiqolo kumbuzo nje! Yiza ngoku! Ewe kunjalo, kukho ukungqubana kumdlalo wothando we-Aquarius kunye neTaurus!
Ubuntu be-Aquarius buyintloko kwaye bude. Bakhululekile njengengcinga eqhutywa yimpepho. Bahlala phantse kwi-surreal, indlela yokuphila yokwazi. U-Aquarius ngumhambisi kunye nomhambi. Ukuhamba kunye nokuqhubela phambili yiminqweno ephambili yomntu ozelwe phantsi komqondiso womphathi wamanzi.
I-Taurus inengqondo esisigxina. Impembelelo yomhlaba yenza amaTaureans acothe kwaye abe nemethodical. Lonke inyathelo limalunga nokucwangcisa. Intuthuzelo ibalulekile kubomi beTaurus. I-Inertia ngumba obalulekileyo kobu buntu. Ngamanye amaxesha iTaurus ayikwazi ukuphuma ngendlela yabo. I-Aquarius iyabaleka, kwaye i-Taurus irhuqa emhlabeni ingavumi ukutshintsha!
I-Aquarius kunye neTaurus Polarity
U-Aquarius yi-yang, amandla endoda. I-Taurus yi-yin yamandla obufazi. Ngokuphikisana neepolarities, unokucinga ukuba kukho ukuvumelana okunzulu kobu budlelwane. U-Aquarius uyacacisa kwaye uyangqina. I-Taurus iyamkela kwaye iyenziwa.
Ukuba ubudlelwane budlulela kwindawo epolisiweyo, zonke ukubheja zicinyiwe. Ukuba i-yin iba yinto engaphaya kwamandla ayo, inokuba ngumfeli-nkolo kubudlelwane. I-Taurus inokuba neenkani kwaye inganyangeki notshintsho kangangokuba bayinto ekrwada. U-Aquarius unokujika abe nobutshaba, ngakumbi xa inkululeko yabo isemgceni.
Amandla e-yin kunye ne-yang anefuthe lokuhambelana kwe-Aquarius kunye neTaurus. Iimpawu zamandla e-yang angaphezulu kwi-Aquarius zibandakanya umsindo kunye nesimo sengqondo sokulawula. Kungcono ukuba aba babini bafunde ubugcisa bokulalanisa ukusukela ngomhla wokuqala kolu nxibelelwano lucelomngeni. Ukugxininiswa rhoqo ekugcineni ukulingana: Obo bubugcisa be-Aquarius kunye neTaurus combo. Ngaba iya kusebenza kuye wonke umntu? Akunakwenzeka. Esinye isibini sinokucula 'Ndiyaphambana ngawe,' esinye sinokuba sicula, 'Ndiyazicaphukela ngenxa yelevin' yakho. '
Imiba ye-Aquarius kunye neTaurus
Inxalenye ye-Aquarius kunye neTaurus ityhila indawo yomqondiso ngamnye kwivili le-zodiac. Ngumlinganiselo womgama phakathi kwabo. Le miqondiso ineempawu ezimbini ezihleli phakathi kwabo. Ke ngoko, ngokwembonakalo, i-Aquarius kunye neTaurus isikwere esinye.
Ukucwangciswa kwesikwere kudala esi sikhundla apho sikwi-90-degree, i-angle enzima. Xa uphawu olunye lubonisa olunye, amandla kubudlelwane ayaphikisana. Olu hlobo lwento luyenza ukuba kubekho ukubakho kweempikiswano okanye ukungaqondani. Kwi-Aquarius kunye neTaurus yokubhangqa, kukho iintloko ezithile ezingqubanayo kunye neengxoxo ezingathandekiyo. Into onokuyilindela kolu lwalamano lucelomngeni akukho kuphumla konke konke!
Ukuba bafuna isebenze, kuyakuthatha yonke imizamo ukwenza ukuba yenzeke. Esona sifundo siphambili kulwalamano lwe-Aquarius kunye neTaurus bubugcisa bokulalanisa. Ukuba banakho ukwenza isenzo sabo kunye, akukho nto iya kuze ibanqande ekufumaneni ulonwabo.
Izinto zeAquarius kunye neTaurus
Xa kuziwa kwizinto, umoya ulawula ngaphezulu kwe-Aquarius eyintloko. Umhlaba yinto ehambelana neTaurus. Ezi zinto zimbini zahlukile njengobusuku nemini. Nge-Aquarius, umoya umenza umntu abe nobukrelekrele kwaye akhululeke.
U-Aquarius onefuthe lomoya unesipho sokuyilwa kunye nobuchule bokuyila. I-Taurus, umphefumlo wasemhlabeni, usekwe kakuhle kodwa ucelomngeni ukukhuthaza. Ewe, kukho umahluko kwisisusa ke esi sibini siza kungqubana. Kodwa, ukuba i-Aquarius inceda iTaurus ukuba ibethe ukuzikhuthaza, iTaurus ifundisa uAquarius ukuba anciphise.
Ukuthetha ngobulumko, u-Aquarius unokuthetha ucoce indlebe yakho. I-Taurus iyasithanda isandi selizwi kodwa inokonwabela ukuthula cwaka nayo. Ubuncinci kwincoko, le combo ihlangana kunye ngokulula. Kodwa, ukuba ubuntu buka-Aquarius bungalingani, benza izithembiso abangabambeleli rhoqo. Oku akuyiyo into ebalulekileyo kwiTaurus enyanzelisa ukunamathela kwilizwi lomntu njengensimbi.
Ukuba umdlalo wothando we-Aquarius kunye neTaurus ungalingani, u-Aquarius unokuthetha ukubulawa kwezinto ezikhohlakeleyo ngexesha lengxabano. I-Taurus inokwenza okufanayo ukuba bayafikelela kwincopho yomonde wabo. Kengoku ntoni? Isihogo, emhlabeni. Icacile kwaye ilula!
U-Aquarius kufuneka abe nentumekelelo yokuzibophelela ekugqibezeleni into ayiqala. Ewe, u-Aquarius akayithandi into eqhelekileyo okanye yesiqhelo. Kodwa, obu budlelwane buya kufuna ukuzincama okuncinci kubo bobabini abachaphazelekayo. Kukwanjalo nakwiTaurus eyakudinga ukuba nentlalontle ngakumbi kwaye iguquguquke kwizicwangciso zakho.
Indoda ye-Aquarius kunye nomfazi waseTaurus ngumxube kakhulu. Kuya kubakho yonke into eninzi ye-lovin eqhubekayo ukuba bayakwazi ukudibana ngamehlo. Ukuba akunjalo, uxolelo oluninzi (kunye neebhandeji ezimbalwa zamaqhuma kunye nemivumbo) ziya kufuneka endaweni yoko. Impumelelo yokuthandana ixhomekeke kuwo omabini amaqela kunye nakwinqanaba labo lokuguquguquka.
Inqanaba leenkani lomntu ngamnye linefuthe lokuhambelana kwe-Aquarius kunye neTaurus. Esi sibini siqala ukwahlula iinwele xa sisabelana ngeembono kunye nefilosofi. Esi sibini sibona iingxaki xa sizisa isimo esingenakulinganiswa etafileni. Ukoyisa umceli mngeni, iqabane ngalinye kufuneka ligobe kancinane. Ulungelelwaniso luyafezekiswa ngokuzimisela ekwamkeleni i-eccentricities yeqabane.
Kukho izinto ezintle kolu lwalamano nangona. Umfazi waseTaurus uyazi ukuba kuthatha ntoni ukwenza ikhaya elihle kakhulu. Yonke into eseTaurus ’house is earthy and posh. Ngobuchule bokudala kunye neliso lobuhle, iTaurus yenza imeko-bume yasekhaya imeme. Le yindlela umfazi waseTaurus anokuyigcina ngayo indoda yakhe yase-Aquarian: Ngokudala indawo yokuthuthuzela ngokupheleleyo.
NgeTaurus yenyama kunye ne-erotic, indoda ye-Aquarius iya kufumana ulwaneliseko olupheleleyo ngokwesondo. Imazi yaseTaurus ayinangxaki yokuhlala isebenza kwisebe lezesondo. U-Aquarius uyayixabisa indalo yenkanuko yomfazi waseTaurus kunye nomnqweno wakhe. Uya kudibana neninzi yeemfuno zakhe ukuya kufikelela kulingo ukuba akangeweli ngaphaya kwemida ayibekayo. Ungakhathazeki, umfazi waseTaurus akanangxaki yokubeka unyawo. Akanangxaki yokuchaza into aza kuyenza kwaye akazukuyamkela ngendlela yokuziphatha.
Ubudlelwane be-Aquarius kunye neTaurus budinga imida ecacileyo ukuba buza kuphumelela. I-Taurus sisidalwa esifuna ubudlelwane obuchazwe kwimigca ecacileyo emnyama namhlophe. Akukho ndawo zifipheleyo. Akukho mibala isezantsi. Akukho ngaphaya okanye iikona ezingachazwanga. Indoda ka-Aquarius iveza ubudlelwane bayo njengegcisa elilingana nemibala engwevu. Ewe, kwigumbi lokulala, isimo sengqondo se-Aquarian singqiyame ngakumbi kwicala le Amathunzi angamashumi amahlanu nantlanu kagreyi!
Ukuzibophelela kwangempela yinto ebizelwe apha. U-Aquarius kufuneka anikezele ngokungaguquguquki ukuba olu lwalamano luza kuphumelela. Xa ushiya imeko yokungazibopheleli, olu thando lunokunyuka luye kwiindawo eziphakamileyo. U-Aquarius uya kuthembeka xa sele ezibophelele, ekholisa iTaurus ngokungapheliyo! Onke amaTaurean afuna ukunyaniseka okuphezulu. Ukuba abayifumani, ingqumbo yabo yomona iya kuzityhutyha ehlabathini!
Onjani wona ukuxaka nokumangalisa lo mcimbi wothando unokuba nawo! Ukugxila kukaTaurus kwizinto ezilula nezisebenzayo kuyaphikisana nobomi obugqithisileyo be-Aquarian. Indoda ka-Aquarius kufuneka incame ixesha layo lasimahla ngokuhlala ekhaya kunye nesithandwa sayo saseTaurean. Ngokunjalo, iTaurus kuyakufuneka ifunde ukuphuma kwindlela yayo kwaye iphume iye kulala edolophini. Umdlalo wothando we-Aquarius kunye neTaurus uyaphumelela xa izikhundla zamandla zilingana.
Indoda yaseTaurus iya kuluthanda unxibelelwano lokuqala olwenzileyo kunye nomfazi wayo wase-Aquarian! Baza kuvusa ubudlelwane obusekwe kwimidla efanayo kubugcisa nakumculo. Xa umbona ekhayeni lakhe okokuqala, usenokuthabatheka yindlela yangaphakathi e-ome.
Umfazi wase-Aquarius usete umhombiso wakhe ngokusekwe kwinto nganye ethetha kuye kwinqanaba lomntu. Unokuba neglasi yesilwanyana sezilwanyana kwikona enye yegumbi lokuhlala. Jonga ngapha kwegumbi kwaye ubone ukuphindaphinda kwefantasy kaFrank Frazetta isebenza kuyo yonke indlu nayo. Heyi, ngumculi wakhe awuthandayo kutheni kungenjalo!
Indoda yaseTaurus iya kubhena kumfazi wase-Aquarius kwasekuqaleni. Ngoba? Ukhululekile kakhulu nge-eccentric kwaye uhlala kwi-fringe. Indoda yaseTaurus imalunga nozinzo kunye nentuthuzelo. Izinto zangaphandle kuye ziheha kwangethuba kolu lwalamano lubuthathaka. Ugxininiso kubuthathaka lubalulekile apha. Ukuzinza okusebenzayo okutsala umfazi we-Aquarius kuguquka kukudelela nokukruquka ngokukhawuleza!
Ithetha ntoni le nto? Uhlobo oluchasayo lwesi sibini lwenza ukuba ukuhambelana okuncinci kweAquarius kunye neTaurus. Kuthetha ukuba indoda yaseTaurus ayizukukhetha ngaphandle kokunyusa umdlalo wayo! Kuya kufuneka acwangcise imihla kwaye adibanise kwizinto ezininzi zokuzonwabisa. Ukugcina umfazi we-Aquarius kwizwane zakhe kuya kuqinisekisa ukuba ugcina amehlo akhe kwibhola. Ngaphandle koko, ukukruquka kuya kumqhubela ngaphandle kwemida yobudlelwane.
Xa kuziwa kukungavisisani, omabini amaqela aya kufuna ukufunda iindlela zokubuyela umva kwingxoxo. Embindini wempikiswano, imililo yomsindo iphembelela umzuzu. Akuyi kubakho mntu uphumeleleyo apha. Ulungelelwaniso kunye nokuqonda kubalulekile. Kodwa, i-Taurus kunye ne-Aquarius imilo ibangelwa kukuqaqadeka. Abantu ababini abomeleleyo abaneentloko badla ngokwenza ukulalanisa kungenzeki.
Indoda yaseTaurus iyakufumana isimilo se-Aquarius's eccentric behaviour tantalizing okwethutyana. Kodwa ukungabikho kwayo kwe-orthodoxy kuya kuba yindawo ebuhlungu ekugqibeleni. Umfazi wase-Aquarius unengqondo eguqukayo. Indoda yaseTaurus iyasebenza. Hlanganisa ezi ngqondo zimbini kunye uya kubiza isiphithiphithi ngaphandle kombuzo!
Ukungasebenzi kakuhle xa kuthelekiswa nomba osebenzayo kuya kuvela kubudlelwane be-Aquarius kunye neTaurus. Omnye umba ophambili unxulumene nemali. I-Taurus iyasindisa kwaye inqwenela ukhuseleko lwezezimali. Umfazi wase-Aquarius uyakuthanda ukuzimela kwaye uchitha imali njengamanzi ayo. Ukuphuma kwemali rhoqo kuya kuqhuba u-Saurus okonga imali. Inkcitho echitha u-Aquarius uyakufumana ukubanjwa okuxineneyo kweTaurus kwimali ezinkozo kukucaphuka.
Isibini esitshatileyo i-Aquarius kunye neTaurus sijamelene nedabi elonyukayo. Inqaku lokuhambelana kwabo bazalwa phantsi kwezi mpawu zelanga liphantsi. Ke, ukudibanisa sele sisenzo esichasayo iingxaki. Ukuphapha nokumamela kwiimfuno zomnye kuya kuqinisekisa ukuhlala kobudlelwane.
Enkosi ngokujonga i-zodiac kunye nolwazi lokuhambelana kwi-Daily Horoscope Astros! Kukho okuninzi ngakumbi apho kwavela khona, uyazi! Ungaphuthelwa lonke ulwazi olumangalisayo lweenkwenkwezi onokufikelela kulo simahla!
Funda konke malunga noMqondiso we-Aquarius Zodiac
Cofa ukuze ufunde konke malunga Iimpawu ze-Aquarius, Ubuntu, kunye neempawu !
Ufuna uthando? Cofa ukuze ufunde konke malunga Ukuhambelana kweAquarius !
Fumana ulwazi olunzulu malunga Indoda ka-Aquarius !
Chaza imfihlelo ye Umfazi we-Aquarius !
Ngaba unayo Intombi yeAquarius okanye uNyana? Cofa ukuze ufunde konke malunga ne Umntwana ka-Aquarius !
zeziphi iiplanethi esibhakabhakeni ngoku
umfazi wepisces kunye nendoda e-libra ngokwesondo
kwixa elizayo i-halley's comet iya kuvela